Maro ireo finday aterineto slots misy ny hilalao izay mifototra amin'ny malaza olo-malaza, tantara mitohy amin'ny tele, ary sarimihetsika. mpanjaka Kong (Next Gen) dia ny iray tamin'izy ireo, ary dia efa malaza eo amin'ny slot tia. Miorina amin'ny ny malaza 1933 sarimihetsika ny mitovy anarana, slot izany dia ny tantara iray goavana indrindra rajako izay tezitra, ary dia teny an-dalana mba handrava ny New York City. Tsy maintsy hamonjy ny tanàna avy amin'izany mampihorohoro biby ary koa tsy maintsy hamonjy ny fiainan'i Gorilla. Ny sasany dia hahazo valisoa mahatalanjona noho ny famonjena ny tanàna. Ho ihany koa ny handresy mahagaga 150 maimaim-poana spins amin'ny alalan'ny famonjena ny Mpanjaka Kong avy amin'ny fiaramanidina. Kofehy ireny rehetra dia ho feno mihazakaza-dava sy ny fialam-boly hetsika, dia ho vonona ny hijery bebe kokoa momba izany mampientam-po an-tserasera slot.
Ny bola ny fampivelarana sy ny fandefasana izany lalao mahagaga mandeha ho NextGen Gaming. Ity orinasa ity dia mihazona ny ambony toerana ao amin'ny lisitry ny mpitarika izao tontolo izao amin'ny aterineto slot mpandraharaha. Azo antoka fa, ny tsara indrindra amin'ny aterineto lalao mpandraharaha miasa ho an'ny orinasa izany, ary dia toy izany no nanomboka nametraka tamim-pahombiazana ny lalao feno sary kilasy voalohany sy ny voly tombony endri-javatra. mpanjaka Kong (Next Gen) dia mahery ohatra ny mpandraharaha 'famoronana, izay efa nahazo laza lehibe ao amin'ny aterineto lalao izao tontolo izao.
About ny lalao:
milalao mpanjaka Kong (Next Gen), ny 5×3 miraingiraingy azon'ny ary 25 payline-tserasera slot, dia ho iray tsy hay hadinoina traikefa ho anao. Ny reels sy ny fototra dia voahaingo amin'ny fomba izay toa tena mitovy lalao toy ny tany am-boalohany Kong Mpanjaka sarimihetsika. Ny mpandraharaha dia nampiasa sarimihetsika ny tena zavatra toy ny tena marika. Mpanjaka Kong no marika ny bibidia sy ny lalao ny famantarana no mariky ny aelezo. Ny wagers miainga eo 25p sy ny £ 50 ary mahatonga mahavariana isan-kofehy ireny fihetsik'ireo sary mihetsika eo amin'ny efijery.
Tany ny Mpanjaka Kong marika famantarana amin'ny miraingiraingy azon'ny bibidia 3 ary Mpanjaka Kong Goes rajako endri-javatra dia hatao niteraka. Ary ny bibidia dia hanitatra famantarana sy handrakotra ny toerana rehetra eo amin'ny miraingiraingy azon'ny amin'ny manorotoro ny efijery. Ity endri-javatra lehibe mamaly soa loka ny mpilalao, raha ny bibidia dia miteraka ny tsara indrindra handresena ao sequences hafa-danja avo fanehoana an'ohatra.
mpanjaka Kong (Next Gen) slot-tserasera dia manana endri-javatra mahavariana kofehy ireny maimaim-poana, izay atao hoe Mpanjaka Kong hamotipotika endri-javatra. tany kely indrindra 3 Mampiely na aiza na aiza tamin'ny dimy reels sy endri-javatra izany dia hatao mampandeha. Ankehitriny dia tsy maintsy hanampy Mpanjaka Kong in manorotoro fiaramanidina. Afaka mandresy ny ho 150 maimaim-poana spins raha soa aman-tsara ny fiaramanidina rehetra smashes. Toy izany maro ny maimaim-poana spins dia ho ampy mba hanampy betsaka ny loka eo amin'ny tantara sy ny lalao farany ao amin'ny banky.
mpanjaka Kong (Next Gen) slot aterineto dia maneho ny tena mamorona ny NextGen Gaming ny mpandraharaha. Io endri-javatra io lalao manan-karena dia safidy lehibe ho an'ny fialam-boly sy mibahan-toerana Fandresena.